Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Barcelona si Nigeria & ụwa | TAA
Ego a na-akwụ ụgwọ ezi uche na-adịghị na ya, na-eyi egwu ịghachị azụmaahịa - ọchịchị Zimbabwe
Ndị uweojii na-ekwu na onye uweojii ahụhụ na-egbu mmadụ na Ogun
BSN: A ghaghị ịkụziri ire asụsụ n'ụlọ akwụkwọ
Gọọmenti Umahi na-ekwupụta ụbọchị ezumike ọha na eze maka ndebanye aha ndị nhoputa aha
Gọvanọ Emmanuel na-ekwupụta nchekwube ka mmanụ mmanụ ga-ebute $ 73 kwa ...
Onye isi ochichi nke World na agba ndi Africa ume ka ha jiri usoro onodu aku na uba
NSE na-ebu 760.52 nde uzo jiri uru N8.91 jiri ahia oma
Lagos setịpụrụ ikpughe ihe oyiyi ọhụrụ maka Gani Fawehinmi
Report: Paris Saint-Germain na Paul Pogba onye isi oru na Manchester ...
Chelsea na-agbachitere Njikọ Njikọ na Burnley
Roy Hodgson: Crystal Palace agaghị ere Christian Benteke, Wilfied Zaha
Arsenal kwadoro tiketi tiketi maka Europa Njikọ nke ikpeazụ na Atletico
Debe ihe akụrụngwa n'ime otu afọ ma ọ bụ hapụ ikike - NCC agwa ...
Ezigbo Zidine Zineine Real Madrid na-eme ka egwuregwu dị iche iche dị iche iche n'oge a
Zinaline Zidane, bụ onye na-ahụ maka Real Madrid, na-efu na Tuesday iji kọwaara ya ihe mere ndagwurugwu La Liga na-emechu ihu ya na-egosi ọdịiche ha na-egosi na UEFA Champions League.
Otu aha aha mmadu aha ya bụ Lionel Messi bụ onye nnọchiteanya njem nleta
Òtù Mba Ụwa nke Òtù Mba Ụwa kwuru na Monday, ọ họpụtara FC Barcelona Argentina Argentine star Lionel Messi dị ka onye nnọchianya iji kwalite njem nleta.
Jorge Sampaoli: Lionel Messi tozuru etozu iji me ka Argentina nweta ebube na Russia
Lionel Messi na FC Barcelona nwere ikike na ntozuzu iji mezuo olile anya Argentina maka mmeri nke 2018 FIFA World Cup na-eme nke ọma n'afọ a, onye otu nchịkwa nke otu mba Jorge Sampaoli kwuru.
Andres Iniesta na-ekwu na ọdịnihu na FC Barcelona amaghị
FC Barcelona captain, Andres Iniesta, nọgidere na-ejighị n'aka ma ọ ga-ahapụ ndị Spanish La Liga ndú oge a iji kwaga China.
Barcelona si Sergio Busquets pụta maka izu atọ
FC Barcelona nwere ike ịbụ na ọ bụghị onye dị mkpa Sergio Busquets maka UEFA Champions League nke mbụ na nkeji iri na anọ mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwuru na Spain mba ga-atụ uche izu atọ nke ihe.
Barcelona kwekọrịtara € 30m ịzụta nhọrọ iji banye Arthur si Gremio
Barcelona kwadoro nhọrọ ịzụta ihe na Gremio maka Brazil onye na-ede egwuregwu Brazil bụ Arthur Melo mgbe e kwuchara okwu na obodo Catalan n'ime izu gara aga.
Ndị na-agba Liverpool na-akwado Mohamed Salah na-abụ abụ Muslim
Ndị òtù Liverpool Football Club nabatara Mohamed Salah, onye ọkpa a mụrụ n'Ijipt, na-abụ abụ ọhụrụ nke na-akwado okwukwe 25 afọ.
Antonio Conte na-eme ihe nkiri Chelsea na-aga n'ihu iji dozie nsogbu ndị siri ike
Onye na-elekọta Chelsea bụ Antonio Conte ga-agbagharị n'òtù ya, malite na Friday na English FA Cup na Hull City.
Play obere football tupu iko ụwa - Argentina FA isi agwa Lionel Messi
Onye isi oche nke football nke Argentina, Claudio Tapia, kwuru na ọ gwara onyeisi obodo bụ Lionel Messi ka ọ bụrụ egwuregwu ole na ole maka La Liga n'akụkụ FC Barcelona tupu June.
Chelsea laghachi na 4, na-emeri West Broom
Ihe mgbaru ọsọ abụọ sitere na onye Belgium na-agba afa Eden Hazard na onye ọzọ Victor Victor nwetara Chelsea na ụlọ 3-0 na-emeri West Bromwich Albion na England Premier League na Monday.
Philippe Coutinho na-eme nke mbụ dị ka akwụkwọ Barca Cup nke ikpeazụ
Ndị na-agba ọsọ FC Barcelona rutere nkwụcha nke eze na 2-0 merie Espanyol iji merie mpempe ụkwụ mbụ na otu abalị mgbe ntinye aka ọhụrụ Philippe Coutinho mere mmalite ya.
Real Madrid na-ata ahụhụ na Copa del Rey ụzọ
Real Madrid nwetara Levanes nke 2-1 na-emenye ihere na Wednesday ka ọpụpụ King's Cup na njedebe nke anọ na nke ikpeazụ na mgbaru ọsọ ndị ọzọ.
Manchester United na-ejide ebe dị elu na Deloitte 'Ego League'
Manchester United kwadoro Real Madrid ka ọ nọgide na-enweta nnukwu ego na-enweta ego na-eto eto na ụwa dị ka akụkụ nke Premier League gosipụtara ọnụ ego ego ha na-arị elu, akụkọ Deloitte nke "Ego League" kwuru na Tuesday.
Barcelona zụtara Neymar maka € 200m - akụkọ
FC Barcelona kwusiri ihe karia € 200m ($ 245m) maka Neymar tinyere ugwo ya na "otutu ihe ndi ezoro ezo nke mbufe," El Mundo nke Spain kwuru kwa ubochi n'ubochi Thursday.
Manchester United meriri Barcelona, ​​Real Madrid na enweta ego kwa afọ
Manchester United meriri nnukwu ego nke ụlọ ọrụ European ọ bụla na 2016 afọ ego mgbe ọnụọgụ 32 na-arị elu karịa Real Madrid na FC Barcelona, ​​UEFA na-ekwu.
Luis Suarez kpaliri ihe ngosi nke Barcelona na Real Sociedad
Luis Suarez kpaliri otu FC Barcelona biaghachi na Sunday iji nyere ndi isi obodo La Liga aka laghachi site na ihe mgbaru ọsọ abuo iji tie Real Sociedad 4-2 na Anoeta na Sunday.
Ndị isi ụtụ isi nke Spanish na-enyocha ntọala Lionel Messi
Ndị na-ahụ maka ụtụ isi Spanish na-enyocha ma ịkwụ ụgwọ site na FC Barcelona na Lionel Messi ntọala iji nyere onye ọkpụkpọ ahụ aka izere ụtụ isi, Spanish kwa ụbọchị El Mundo kọrọ na Saturday.
Ndị na-ahụ maka ụtụ isi nke Spanish na-agba ntọala Lionel Messi
Myma Adwowa Belo-Osagie, onye ọrụ ibe ya, Udo Udoma & Belo-Osagie Law Firm, bụ onye a na-asọpụrụ nke mba America American Academy of Arts and Sciences.
Ụlọ akụ Europe (EIB) na Bank Development Bank (AfDB) kwetara ịkwado Ụlọ Ọrụ Development Development nke Nigeria (DBN) na $ 70.
Zimbabwe dọrọ aka ná ntị na Tọzdee na eriri na-eti mkpu na-agbasi mbọ ike ime ka akụ na ụba dịghachi ndụ mgbe Robert Mugabe nwụsịrị, dịka nkwụsị na ndị nọọsụ na-emetụta.
Mgbe nwunye nke Kazeem Akeem, onye uwe ojii na New Market, na mpaghara Ijebu Ode nke Ọchịchị Ogun, na-amụ nwa oge ọ bụla site na November 2018, nwa ahụ ga-abụ nna.
Secretary General of the Society Society of Nigeria, Dr. Dare Ajiboye, ekwuola na gọọmentị na ọkwa niile dị na obodo kwesịrị ịrụ ọrụ iji chebe asụsụ obodo ahụ na mba ahụ.
Neymar kwuru na ọ nwere ọnwa ọzọ ka ọ gbapụrụ na mmerụ ụkwụ, ọ bụ ezie na Paris Saint-Germain ka na-atụ anya na ya ga-egwuri egwu tupu ọgwụgwụ oge ahụ.
OBD iji soro onye otu ya na ulo akwukwo bekee iji zulite nyocha nke ulo oru Afrika
Ụlọ Ọrụ Development Bank (AfDB) na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mgbakọ na Nkà Mmụta Na-ahụ Maka Ọmụmụ (Africa) na-achọ ugbu a ka ha nwee ike ịmepụta ụlọ ọrụ nyocha na njikọ nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà na Massachusetts.
IMF: Onu ahia Naijiria ga-abia na 2018
Ego ego ego International (IMF) kwadoro na onu ogugu nke Naijiria ga-abanye na digit abuo na 2018.
Uche Secondus jụrụ gọọmenti etiti gọọmentị ka ọ kwụsị igbu mmadụ na mgbasa ozi
Uche Secondus, onye isi ochichi mba nke PDP (PDP), gwara gọọmentị gọọmenti ka ọ kwụsị njide mmadụ na mgbasa ozi ".
Ihe mere m ji hapụ Chelsea - Michael Emenalo
Gọọmentị Plateau na-eyi egwu na 155 ọhụrụ ndị nkụzi n'ọrụ na abụọ ...
Paris 2024: IOC kwadoro ụbọchị ọhụrụ maka egwuregwu Olympic, Paralympic Games
Ụtụ ahịa mgbasa ozi ọha na eze: Ndị na-akwado ndị na-akwado iwu na-ebo Yoweri Museveni ebubo nke nnwere onwe ikwu okwu
Enwere m afọ abụọ maka ime ihe ike nke di m - Nwanyi na-agwa ụlọ ikpe
Onye gburu onye Tunisia na-egbu Lassad Nouioui ka e jidere ya na Spain